- လုံးချင်းတိုက်သစ်အမြန်ရောင်းမည်. Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
!!!လမ်းမကြီးတည့်ပေါက် လုံးချင်းတိုက်သစ် အမြန်ရောင်းမည်. သိန်း...2100 ညှိနှိုင်း မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 39 ရပ်ကွက် တပင်ရွှေထီးလမ်းမကြီးတည့်ပေါက် လမ်းကျယ် လမ်းသန့် 40' * 60' ပေကျယ် 1 RC တိုက်သစ်2MasterBedrooms,1 SingleBedroom ကျွန်းပါကေးခင်း အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး အရှေ့လှည့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Cb 09 799017250 (viber) data ကြည့်လိုပါကတစ်ရက်ကြိုတင် ဖုန်းဆက်ပေးပါခင်ဗျာ
ကျွန်းတောလမ်း စမ်းချောင်း အရောင်း
အရွယ်အစား 1175.00 စတုရန်းပေ